Mariela Carril | | ဖိလစ်ပိုင်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ဖိလစ်ပိုင် ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောခရီးသွား ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများစွာရှိပြီးထိုအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အရှေ့တောင်အာရှ၏ဂန္ထဝင်ခရီးစဉ် မှလွဲ၍ လုံးဝခရီးစဉ်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အချိန်သိပ်မရှိပါကခရီးစဉ်တစ်ခုတည်း၌ပင်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်၎င်း၏အလှအပတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်တံခါးပြန်ဖွင့်ရန်တံခါးဖွင့်ထားသည်။ ဒီနေ့ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် မြောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင် နှင့်အနည်းငယ်ပိုရှည်ခရီးစဉ်ပုံကြမ်း၌တည်၏။
ဖိလစ်ပိုင်သည်ကြီးမားသောစုစုပေါင်းဖြစ်သည် ကျွန်းများ စိုစွတ်သောတောင်များ၊ ဆန်စပါးစိုက်ခင်းများ၊ မြစ်ကြီးများ၊ သဲသောင်ပြင်များနှင့်ကြည်လင်သောရေပြင်များရှိသည်။ ကျွန်းခုနစ်ထောင် လူအများစုကသူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးရေငုပ်စက်များကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကဖိလစ်ပိုင်ကိုမသိရင်ဘယ်မှာစရမယ်ဆိုတာကိုသင်သိချင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောအချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုကောင်းလေပိုကောင်းပေမဲ့ထုံးစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေတွေ၊ ကျွန်းတွေ၊ ရေမှော်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာသွားတော့မယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်း၊ အစကောင်း ဒီအထူးသဖြင့်နှင့်ဖော်ရွေတိုင်းပြည်ကိုသိရန်။
ခရီးစတင် မြို့တော်မနီလာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့အတွက်စပိန်စကားပြောသူတွေအတွက်ဒီမှာစပိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ နာမည်ကျော်ဗိသုကာပညာရှင်တစ် ဦး ကသူမ၏ဟစ်စပန်းနစ်အတိတ်ကိုပြန်အမှတ်ရသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများစုသည်မနီလာကိုအခြားနေရာများသို့ဆွဲတင်ရန်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်မြို့တော်ဖြစ်သည့်အတွက်သင်သိပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်တည်းခိုနိုင်သည်။
အကြံပြုထားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ La ခိုင်ခံ့သောမြို့စပိန်အင်ပါယာဟောင်းအင်ထရာမိုရော့စ်၏ကျန်ရှိသောအရာ။ လမ်းများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်ဥရောပပုံစံအိမ်များကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဒီမှာန်းကျင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကကျိုးနပ်သည်။ The XNUMX ရာစုကနေခံတပ်စန်တီယာဂို ၎င်းသည်စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်မျိုးလုံး၊ အမေရိကန်များနှင့်ဂျပန်လူမျိုးများနေထိုင်သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်
La San Agustínဘုရားကျောင်း ပြတိုက်တည်ရှိသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် တိုင်းပြည်အတွက်ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း။ ဒီမှာ Intramuros ၌တည်ရှိ၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ ကမ်းခြေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာသည် Malecon မနီလာနေဝင်ချိန်ကိုစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာ။ ၎င်းတွင်စွန်ပလွံပင်များဝိုင်းရံထားသည့် ၂ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိပြီးစျေးသည်များနှင့်ခရီးသွားဂီတသမားများရှိသည်။ The Rizal ပန်းခြံ ၎င်းသည်မြို့၏အလယ်ဗဟိုတွင်လှပသောပြင်ပနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းများ၊ ရုပ်တုများနှင့်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသည်။
စျေးပေါတဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ Divisoria Market က၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ တရုတ်ပြည်ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးခေတ်မီတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီမှာရှိတယ် မနီလာစူပါ Mall ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာများသို့မသွားလိုပါကစက်ဘီးငှားရမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ Bambike Ecotours ၎င်းမှာကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် လက်လုပ်စက်ဘီး ဒေသခံများကဝါးနှင့်အတူ။ မမေ့နဲ့!
သင်မနီလာကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့မြောက်ဘက်ကိုသွားဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဒီအတွက်မင်းဒီမှာဘတ်စ်ကားလက်မှတ်တွေဝယ်တယ် Luzon မြောက်ပိုင်း။ အချို့သောခရီးသွားများက Luzon ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုကြပါနှင့်ကမ်းခြေများသို့ခုန်ဆင်းသွားကြသည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်လမ်းသွားမှထွက်ခွာရန်နှင့်လူကြိုက်နည်းသောနေရာများကိုအကြံပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီမှာ Luzon လာပါတယ်။
Luzon မြောက်ပိုင်းကိုအလှဆင်ထားသည် ဆန်ကျန်ကြွင်း။ ယူနက်စကိုကသူတို့ကိုကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် သို့ဖြင့်သူတို့သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်ကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ထိုတွင်နေပြီးအနည်းငယ်မျှသာမသွားပါ။ သငျသညျအညီအမျှလှပသောရှုခင်းများကိုမြင်ချင်ပေမယ့်လူအများကြီးမပါဘဲ, ထို့နောက်သင်၏မဟုတ်သောအခြားစပါးခင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် Banaue ။ သင်သည်နောက်တစ်နာရီခရီးကိုဆက်သွားပြီးလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်သည်။ ဒီနေရာမှာအဖိုးတန်ဖြစ်ကြသည် Batad ဆန်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်.
သငျသညျကဒီမှာရောက်ရှိလာခဲ့ကတည်းကစံပြဖြစ်ပါတယ် တစ်ညတည်းနေ ဥပမာအားဖြင့်နံနက်စာပါ ၀ င်သော Batad Transient House (ဥပမာ Batad Transient House) တွင်တည်ဆောက်ထားသောအိမ်ငယ်လေးများရှိပြီးနောက်နေ့တွင်အေးမြသည့်လှပသောရေတံခွန်များရှိသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Luzon မြောက်ဘက်သို့ဘတ်စ်ကားဖြင့်သင်ရောက်သည်။ မနီလာရှိ Sampoloc fromရိယာမှညတာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယူရို (၂၀) ​​၀ န်းကျင်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီးကြိုတင်မဲသို့မဟုတ်ထိုနေ့တွင်ပင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ညဘက် ၉ နာရီတွင်ဘတ်စ်ကားများထွက်ခွာကြသည်။
မြောက်ဘက်တွင်လည်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအရာတစ်ခုမှာကျော်ကြားသောကျောက်ဆောင်များပေါ်တွင်စီစဉ်ထားသည့်ခေါင်းတလားများဖြစ်သည် sagada ခေါင်းတလား။ ဖိလစ်ပိုင်၏ဤအပိုင်းမှလူမျိုးစုများသည်သူတို့၏သေလွန်သောသူတို့သည်နံရံများသို့ ကပ်၍ သူတို့၏ကောင်းကင်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဆောင်ကြဉ်းပေးသည့်အခေါင်းများတွင်သေဆုံးသွားကြသည်။ အတော်လေးနည်းနည်းလေးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီမှာအခေါင်းအချို့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Banaue မှဘတ်စ်ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်, Baguio သွားဘတ်စ်ကားပေါ်။
Baguio ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည်မြို့တော်ဖြစ်သည် တောင်ဘက်တွင် Luzon ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်များကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိခဲ့သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ တိုင်းပြည်ကနေ။ ၎င်းတွင်နွေရာသီအေးမြ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ မနီလာမှကီလိုမီတာ ၂၅၀ ရှိသည်။ ၎င်း၏စျေးကွက်၊ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ်သမ္မတ၏တရားဝင်နေအိမ်ကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုအချို့ရှိသည်။
Luzon ရှိအမြင့်ဆုံးတောင်သည်ဤတွင်ရှိပြီးမီတာ ၃၀၀၀ နီးပါးမြင့်သည် Pulag တောင်တန်း။ သင်သိရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်သောခရီးများရှိပါသည်။ ခရီးစဉ်တွင်ဒေသခံအိမ်တစ်အိမ်၌သင်တည်းခိုပြီးမနက်စောစောအချိန်တွင်တောင်တက်ခြင်းကိုစတင်ရန်တောင်ကြီးကျေးရွာတစ်ရွာသို့ဂျစ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ကောင်းကင်သို့ဤခရီးစဉ်သည်ပင် Luzon သို့သင်နောက်ဆုံးလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး Baguio မြို့သို့ပြန်မသွားဘဲနောက်မှမနီလာသို့သင်ပြန်သွားနိုင်သည်။
တခါ မြောက်ဘက်မှဒီလေ့လာရေးခရီးပြီးစီးခဲ့သည် ယခုတွင်သင်၏ခရီးကို ဆက်လက်၍ ပျံသန်းရန်ရှင်းလင်းသောလမ်းကြောင်းရှိသည် တောင်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်။ Luzon မြောက်ပိုင်းမှလမ်းကြောင်းသို့ကောင်းမွန်စွာသွားနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းရှိသည် Siargao ကျွန်းဥပမာအားဖြင့် surfing ၏မြို့တော်, မင်ဒါနာအိုဒေသတွင်ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည် Boracay, ထိပ်ဆုံးနေရာ - ၄ ကီလိုမီတာရှိသောကမ်းခြေသည်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့်ညတွင်းချင်းများဖြစ်သည်။
သင်တကယ်ပျော်စရာမဟုတ်ပါက Boracay သည်သုံးညမှလေးညမျှကြာသည်။ ဒီကိုသင်လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Batangas မှကူးတို့ဖြင့်လည်းကောင်းသွားနိုင်သည်။ TO သို့ Batangas ဘတ်စ်ကားဖြင့် ၂ နာရီအတွင်းမနီလာမြို့မှသင်ပင်ထိုညသို့ကူးနိုင်ပြီးည ၇ နာရီတွင်ညပိုင်းကူးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါအမည်မရပ်နိုင် Palawan ပြည်နယ်ရှိ Coron၎င်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ ရော့ခ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စိမ်း lagons ။ အဲဒီမှာရှိပါတယ် မရေမတွက်နိုင်သောသင်္ဘောပျက်အထူးသဖြင့်ဂျပန်မှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒါကြောင့်မိနစ် ၂၀ လောက်ကမ်းခြေကနေလှေစီးပြီးရေအောက်ပရဒိသုရှိတယ်။ မင်းဒီမြို့ကိုဘယ်လိုရောက်လဲ Boracay မှ Air Juan နှင့် Caticlan မှသင်ပျံသန်းနိုင်သည်။ လေယာဉ်မှာထိုင်ခုံ ၁၂ နေရာသာရှိပြီးဖိလစ်ပိုင်ကိုလေထဲမှအကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ မျှဝေခြင်းကသင့်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်လျှင် Coron တွင်သင့်တွင်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဟိုတယ်များနှင့် hostels များရှိသည်။ အယ်လ်နီဒို သငျသညျ Palawan, များစွာသောလက်လှမ်းတည်းခိုခန်းများ, စားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်များနှင့်ငုပ်နေရာများနှင့်အတူပရဒိသု၌ရှိကြ၏။ ဂူများ၊ ကျွန်းငယ်များနှင့်ငှက်များစွာသောကျောက်တုံးဖြင့်ငှက်များစွာကိုသတ်ဖြတ်နိုင်သောခရီးစဉ်များစွာရှိသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်သည် Coron နှင့် El Nido ကိုရွက်လှေဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးသောခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ စျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်လှတယ်
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့လာပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သည် Bantayan ကျွန်း, Cebu ။.. ဒါကနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအပိုအချက်အလက်များ - တိုင်းပြည်အတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်စျေးပေါသည်။ ဘတ်စ်ကားများစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မြောက်ဘက်တွင်လေအေးပေးစက်များရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အစားအစာများနှင့်အတူကျွန်းများကြားကူးတို့ကူးတို့ကူးတို့နှင့်လှေများရှိသည်။ လက်မှတ်များကိုဆိပ်ကမ်းတွင်တိုက်ရိုက် ၀ ယ်နိုင်သည်။ စျေးသက်သာသည့်တက္ကစီများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အငှားများလည်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဖိလစ်ပိုင် » ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားဖို့ဘာ